Xog-Sarkaal Awood badan ku leh NISA oo Mucaaradka kala shaqeynaya hakinta doorashada Soomaaliya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Xog-Sarkaal Awood badan ku leh NISA oo Mucaaradka kala shaqeynaya hakinta doorashada...
Xog-Sarkaal Awood badan ku leh NISA oo Mucaaradka kala shaqeynaya hakinta doorashada Soomaaliya
Muqdisho waxaa saacidihii la soo dhaafay aad looga dareemayaa isbedello siyaasadeed oo soo kordhay, waxaana ugu weyn in si dadban iyo si toos ah saraakiisha ciidamada ugu milmayaan siyaasadda, kamana marna cabsida in goorkale dagaal abaabulan uu caasimadda ka dhaco.
Khilaafkan gaamuray ee salka ku haya arimaha doorashada ayaanan loo helin wax xal ah, iyadoona ay soo baxayaan xogo muujinaya in sarkaalka awoodda iyo galaagalka badan ku leh NISA ee Cabdullahi Daahir, Cabdullahi Dheere uu qeyb ka yahay diidmada in doorashada sii socto.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa laga soo xigtay in Cabdullahi Dheere oo NISA ugu magacaaban dabagalka iyo madaxa Mukhaabaraadka uu ka baxay garabka Farmaajo, lana heshiiyay mucaaradka,
Wararka ayaa intaasi ku daraya in mucaaradka ay saaxiibkooda cusub ku qanciyeen ka shaqeynta inuu hor istaago doorashada sii socta ee xubnaha golaha shacabka lagu soo saarayo, balse Rooble iyo Cabdullahi Dheere ayaa maalmaha soo socda la saadaalinayaa in khilaafka ka dhex dhaco.
Dadka aqoonta fog u leh Korneel Cabdullaahi ayaa ayaa tilmaama inuu yahay dilaa, ay qaar badan oo saaxiibadiis kamid ah ugu magac dareen file-ka madow, uuna yahay ninka halista badan ee Farmaajo u fulin jiray howlgallada adag.
Xaaladda dalka ayaa wal wal badan ku beertay aqoon yahanka iyo shacabka qeybihiisa kale, arinta doorashada ayaana ugu wacan oo sii daba dheeraatay, dagaalkii dhacay bishii April in markale mid lamid ah la abaabulo ayaana baqdinta ugu weyn dul daagan tahay.
Mucaaradka ayaa maalmihii la soo dhaafay waday abaabulka kacdoon labaad, waxaan ashir galay maalinti sadexaad oo Muqdisho uga socdo kaga arinsanayaan yag leelidda gole qaran oo dalka gaarsiiya doorasho loo dhan yahay, waloow ay wajahayaan dhankooda culeysyo siyaasadeed.
Waxaa gudiga doorashada ay soo saareen diidmada xildhibaano laga soo saaray Koofur Galbeed, qaar kale oo Galmudug ah ayaa loo cabsi qabaa waxaana loo aaneynaa dhanka NISA oo Cabdullahi Dheere garab adag siiyay xubnaha gudiyada doorashada.
Rooble oo horay u ballan qaaday doorasho cadaalad ah ayay sidoo kale saran tahay caalamadda ugu weyn ee gaduudan, xilli lagu eedeyay inuu dhinaca Villada u garbinayo, sidoo kale Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaanan wali bilaabin doorashada golaha shacabka, iyadoo magaalooyinka Garbahaareey, Baladweyne, iyo Boosaaso ay xaalado doorashada caqabad ku ah ka taagan yihiin.
Xeel dheerayaasha amniga iyo siyaasadda ayaa warbaahinta iska weydiinaya Korneel Cabdullahi ma waxaa uu gali doonaa kaalintii Gen Saadaq Joon ee xilli xaaladdu sidaan oo kale xasaasi ahayd dhinac isu rogay kana baxay garabka Farmaajo.
Previous articleXog-Sirdoonka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay dagaalka TPLF ee Itoobiya.
Next articleXaqiiqada Shirkii Burco 1991-kii Ee Loo Tixraaco Yagleelka Somaliland